Cuntooyinka qani ku ah birta ee cuntada ubadka | Bezzia
Tony Torres | 10/05/2022 23:55 | Dhallaanka
Nafaqeeyayaalka muhiimka ah sida birta oo kale, oo kaalin aasaasi ah ka ciyaarta korriinka iyo sidoo kale caafimaadka guud, ayaan ka maqnaan karin cuntada ilmaha. Inta lagu jiro bilaha ugu horreeya nolosha, Ilmuhu waxa uu caanaha ka helaa birta iyo nafaqooyinka kale ee uu u baahan yahaySidaa darteed, waxaa lama huraan ah in hooyadu raacdo cuntooyin kala duwan oo dheellitiran xilliga uurka iyo naaska nuujinta.
Laakin marka ay timaaddo quudin dhammaystiran, marxaladaas madadaalada ah marka ilmuhu ogaado cuntooyinka adag, waa lagama maarmaan in la hubiyo in cuntadu ay buuxiso baahiyaha nafaqeynta ee ilmuhu u baahan yahay. Iyaga ka mid ah, waxtarka birta oo aad muhiim u ah si looga fogaado, dhibaatooyinka kale, dhiig-yaraan, xanuunka bilaha ugu horeeya ee nolosha uu keeni karo khalkhal halis ah oo ku yimaada korriinka maskaxda.
1 Cuntooyinka qani ku ah birta in lagu daro quudinta dhammaystirka ah
1.1 Cuntooyinka qani ku ah birta heme
1.2 bir aan heme ahayn
1.3 Cunto isku dheeli tiran si loo ilaaliyo heerarka saxda ah ee birta
Cuntooyinka qani ku ah birta in lagu daro quudinta dhammaystirka ah
Ka hor inta aanad eegin cuntooyinka ugu badan ee lagu taliyey ee qani ku ah birta ee cuntada ilmaha, waa in la xasuusnaado in cuntada ugu muhiimsan inta lagu jiro sanadka ugu horeeya ay tahay. nuujinta. Sidaa darteed, waa inaadan ku mashquulin saamiga cuntada, cadadka cuntada ilmahaagu cunayo ama haddii uu ka jecel yahay alaab ama ka yar. Taasi wax yar ayaa lagu xallin doonaa, sababtoo ah Helitaanka cunto adag waa hab tartiib tartiib ah ku darsiga nafaqeynta waxaa lagu dabooli doonaa caano sanadka ugu horeeya.
Si kastaba ha noqotee, sida ugu dhakhsaha badan ee ilmahaagu ula qabsado cunista dhammaan noocyada cuntada, way kuu fududaan doontaa inaad siiso ilmahaaga cunto kala duwan oo dheellitiran. Iyadoo la tixgelinayo in carruur badan ay cuntadu dhibaato ku tahay, in aysan diidin wax cunto ah waa guul buuxda. Ma noqon doontaa guul la dammaanad qaado haddii uu aqbalo dhammaan cuntooyinka sida ilmo? Maya, wax hubaal ah noloshan ma jiro, laakiin waa jira ilmahaagu waxay u badan tahay inuu diido dhawr cunto.
Cuntooyinkan oo bilaabmaya ku dhawaad ​​6 bilood, cuntooyinka waxa lagu soo bandhigaa waxyar. Marka hore si fudud loo dheefshiido miraha iyo khudaarta, badarka iyo cuntooyinka kale ee si tartiib tartiib ah u soo bixi doona. Birtu way ku jirtaa dhamaantood, in kasta oo aanay isku saami ahayn. Si loo hagaajiyo sahayda birta ee cuntada ilmaha loona yareeyo khatarta dhiig-yarida, waa inaad ku dartaa cuntooyinkan qani ku ah birta.
Cuntooyinka qani ku ah birta heme
Birtu waa macdan ku jirta cuntooyin badan, in kasta oo aanay isku qiyaas ahayn, sidoo kalena aan jidhku si la mid ah ugu milmin. Kala soocida birta ayaa aad muhiim u ah si cuntada ilmuhu u noqoto mid dheeli tiran oo cunitaankiisa nafaqayntan uu yahay mid ku filan. Dhinaca kale waxaan leenahay heme iron, taas oo ka hortagta dhiig yaraanta birta.
Birta noocaan ah waxaa laga helaa cuntooyinka asalka u ah xayawaanka., gaar ahaan hilibka cas iyo hilibka xubnaha jirka. Cuntooyinka leh qaybta birta ugu badan ee heme-ga waa beerka, kelyaha, dhiiga, wadnaha ama rootiga macaan. Si kastaba ha ahaatee, maaha cuntooyin ku haboon cuntada ilmaha. Sababtan awgeed, way fiicantahay in lagu bilaabo cuntooyinka kale sida hilibka cas ee qadar yar oo lagu daro birta aan heme ahayn.
bir aan heme ahayn
Xaaladdan oo kale macdanta waxay ka timaadaa cuntooyinka dhirta ku salaysan, sidaa awgeed xadiidka birta ayaa yaraada si uu jidhku si fiican ugu milmo waxa loo baahan yahay in lagu kabo cuntooyinka hodanka ku ah Vitamin C. Khudaarta qani ku ah birta waxa ka mid ah isbinaajka, brokoli, chard iyo cuntooyinka kale ee asal ahaan ka soo jeeda khudaarta sida lentils ama badarka.
Cunto isku dheeli tiran si loo ilaaliyo heerarka saxda ah ee birta
Si ilmuhu u koraan una kordho si wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in cuntadiisu ay noqoto mid kala duwan oo dheellitiran, sababtoo ah kaliya si aad u hesho dhammaan nafaqooyinka jidhkaagu u baahan yahay. Birta, sidaan horey u soo aragnay, waa lagama maarmaan, sida nafaqooyinka kale sida kalsiyum, fiitamiinnada ama borotiinnada. Sababtan awgeed, mar alla markii hordhaca cuntooyinka adagi bilaabmayo, waxa fiican in ilmaha laga caawiyo inuu ogaado dhammaan noocyada cuntooyinka si cuntadiisu u noqoto mid gebi ahaanba kala duwan, dheellitiran oo caafimaad qabta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Dhallaanka » Cuntooyinka qani ku ah birta ee cuntada ilmaha
Sida loo macsalaameeyo wejiga daallan